Ngo izincwadi eziningi romantic and amabhayisikobho, singabona umhlobiso ongokomfanekiso: izindondo amabili. Ukuze umbhangqwana abanquma ungalokothi uphonse ithawula futhi baphathe portrait kothandekayo is closer kuze inhliziyo. Ulenga ngasentanyeni yakhe manje akukhona nje kuphela ukuthi amantombazane asemancane izintokazi ubudala. Ziya zanda zibhangqwe izindondo. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukukhetha indawo isithombe, i-isikhumbuzo ezincane (esifubeni ngaphambili isikhindi umucu izinwele ozithandayo kufihlwe it in locket) noma kanye nensimu ku oqoshiwe.
igama Beautiful ungakwazi oda ukumiswa, kanye ngamagugu, ngubani bazocula wawakhipha impahla oyikhethile. Ngalesi wonke umuntu iphuzu has ukunambitheka kwakhe siqu, kodwa kuyafaneleka ukuba iningi lala imihlobiso asetshenziselwa Alloys, noma isiliva, igolide isetshenziswa sincipha isibalo sawo. Ifomu ngamaketanga kungaba futhi ngaphandle kokubonisana nomkayo. Ngokwesibonelo, ukumiswa entanyeni esiliva akubalwa athwale efanayo chain yesiliva, ungasebenzisa lesikhumba, lace aluka. Futhi khumbula umlando esithinta inhliziyo lapho medallion eyadluliselwa isuka ezizukulwaneni ngezizukulwane bese uba eyigugu evela kokhokho lomndeni ... Ukumisa amabili kungaba isipho esikhulu ukuba abashadayo noma eyingoduso. Okwakubaluleke ngokukhethekile futhi kuyabiza kungaba isipho uma abantu ngokuhlukana.
Kukhethwa yesitayela elenga entanyeni kuncike isitayela yakho yokugqoka uhlamvu yakho, kusukela yobudala. Isibonelo, ngokubaluleka kuthandwa ubucwebe ezinkulu ngezinto zemvelo - lesikhumba, itshe, ukhuni. Itshe ngaleyo ndlela akudingeki kubize. Ngokuvamile, isikhumba alulame namatshe ayigugu - kahalong, chalcedony, ijaspi, Malachite. ukumiswa okunjalo entanyeni abazenzi ngesandla, futhi uma zenziwa ngalo mculi, ubunkimbinkimbi siyakhazimula. Eliphucuziwe ukhuni yinqaba noma pearl amagobolondo nazo ngokuvamile esetshenziselwa womshini izindondo. Sicela uqaphele ukuthi ubucwebe ezinkulu - elengayo entanyeni, amasongo, namacici big - ikakhulukazi abesifazane kukhona asebeqinile nasebekhulile kunalokho. Babonakala ugcizelele nokuqina nangobuciko. Kulesi umkhuba omuhle ukusebenzisa umbala owodwa noma emibili, kokubili imigexo nezingubo zokugqoka. Iphinde kufanele ugweme ukuxuba izinto nezitayela. Ngokwesibonelo, igolide namacici entanyeni ngeke kuhlangene namacici esiliva esendlini noma izinto zokuhloba omkhulu ngezinto yokufakelwa. Kungcono uma imigexo ngeke kancane, futhi kuzoba isethi Cabangisisa. Ukuze i-pair of ukumiswa entanyeni zivame wenza lezinto okuyinto lapho ungeze ukwenza integrally (isib yenza izinhliziyo).
Kuyinto imfashini muva nje, futhi ubucwebe ubuhlalu lena akuyona ukwelukwa abavamile futhi isibalo esihle, futhi aluka ubuhlalu futhi ubuhlalu cabochons zamatshe yemvelo - oluluhlaza, Malachite. It is ziba ethandwa nobucwebe amasu soutache - ngesikhathi esifanayo cabochons esikhulu aluka kudabuke eyinkimbinkimbi embondelene futhi sebeqedile ubuhlalu. Izindondo metal elula nge embossing elikhulu noma umbhalo kungaba umhlobiso olukhulu suit ibhizinisi, kwesitayela lula ezisemadolobheni. Futhi elenga entanyeni Swarovski zinhlayiya ungakwazi ukuhlobisa ehlobo ingubo egqamile, dress kusihlwa - into esemqoka ukuthi baye bahlanganisa ngokuphumelelayo umqondo jikelele.
6 imigexo balahlwe ukuthi bangambulala umuntu
Indlela ukuhlukanisa zirconia cubic kusukela amadayimane
Moissanite - kuyini? Provenance
Ingcindezi ingane iminyaka engu-10: izinga. Ithebula ingcindezi ezinganeni
"Frost ilanga ..." - ukuchasiswa ElikaDavide S.Pushkina
Yini underlay ngoba laminate flooring kungcono? Substrate for laminate softwood. Underlay ngoba laminate - indlela ukukhetha?
Stafford Inja: isithombe, nemvelo ukubuyekezwa. Kusho inja ukuzalela kanjani Stafford?